Waa maxay ceeryaamo, sidee loo sameeyaa iyo khataraha ay leedahay | Saadaasha Shabakadda
Waxaa jira dhacdooyin saadaasha hawada sida ceeryaamo taasi waxay dhacdaa marka daruuraha ay yihiin heer dhulka. Xaaladaha deegaanka qaarkood ayaa loo baahan yahay si tani u dhacdo. Caadigu badanaa wuxuu yareeyaa muuqaalka wuxuuna sababi karaa shilalka qaarkood. Xaqiiqdii waad maqashay ceeryaamo.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa waxa uu yahay ceeryaamo iyo sida ay ugula xiriiraan ceeryaanta. Intaa waxaa dheer, waxaan kuu sheegeynaa astaamaheeda iyo shuruudaha tababarkiisa.
1 Waa maxay ceeryaamo
2 Qaab dhismeedka iyo astaamaha
3 Khataraha suuragalka ah ee qiiqa
Waa maxay ceeryaamo
Sababta ay u soo muuqato ceeryaantu way kala duwan tahay, in kasta oo ay had iyo jeer ka jawaab celiso xaalado gaar ah oo gaar ah. Xaaladda ugu horreysa ee ay tahay in la buuxiyo si ceeryaantu u samaysmaan waa qaboojinta daran ee ciidda habeenkii. Markay carradu qabowdo tiro ahaan, lakab hawo badan oo qoyan ayaa ka muuqda qaybta u dhow ciidda. Haddii hawadu ku kacdo dhulka agtiisa oo ay qoyan tahay, waxay sababi doontaa saturation. Xaalad kale oo samaysanta ceeryaantu waa marka hawad kululeyd ay ka gudubto dhul qabow. Waxay sidoo kale dhici kartaa marka hawada kulul ay ku dul safarto biyo qabow oo aad u qabow (markaa, badanaa waxaa lagu arkaa meelaha leh barafka).
Si kastaba ha noqotee, ceeryaanta ayaa tilmaamaysa Xilliga qaboobaha sida ku xusan isirkeeda. Waagii hore, ceeryaanta waxaa loo isticmaali jiray magaca xilliga qaboobaha. Tani maanta way isbadashay. Hadda eraygan waxaa loo adeegsadaa in lagu tilmaamo ceeryaamo. Si gaar ah oo gaar ah ceeryaanta ka dhacda badda. Sidaan horay u soo sheegnay, tani waxay dhacdaa marka hawo kulul ay ku soo dhowaato durdur biyo qabow. Tani waa sida biyuhu u noqdaan kuwo dheregsan oo isu roga uumiga biyaha oo dhali doona ceeryaamo.
Cawaaqibka degdegga ah ee uu leeyahay ciirsadu waa iyadoo, ay tahay dhacdo ku dhex jirta jawiga ay ku jiraan qaybo badan oo biyo ah oo hawada ku xanniban oo buuxa, ka dhigaysa aragtida mid adag. Ceeryaantu waxay khatar ku noqon kartaa doomaha maadaama ay wax ku dhici karaan. In kasta oo khatartan si weyn hoos loogu dhigay sannadihii ugu dambeeyay nidaamka raadraaca ee lagu hago GPS.
Erayo farsamo ahaan saadaasha hawada, ceeryaantu waxay lamid tahay nooc ceeryaamo ah. Way ka duwan tahay tan ugu weyn heerkeeda qoyaan. Si loo tixgeliyo ceeryaamo, heerka huurka waa inuu la mid yahay ama ka weynaadaa 70%. Tani ma aha kiiska ceeryaamo caadi ah. Markay ceeryaanta noocan ahi dhacdo, maaddaama ay qoyaan badani ka jirto deegaanka, aragtida ayaa si weyn hoos ugu dhacday 1 km oo keliya.
Isku-darka ceeryaantu waa nuurooyinka hygroscopic iyo biyaha. Waxay kaga duwan tahay inta badan ceeryaanta caadiga ah xaddiga biyaha ee deegaanka iyo cariiriga, kaas oo ka sameysma qashin qalalan. Nuclei-yada loo yaqaan 'Hygroscopic nuclei' waa wax aan ka badnayn dhibcaha yar yar ee xalka cusbada ama walxaha cusbada ee ka imanaya badaha iyo badaha ay qaadaan tallaabada dabayshu. Qaybahaasi waxay ku dhammaadaan jawiga waxayna isku urursadaan huurka hawada ku jira. Si saturationku u dhaco, waa inuu jiraa heerkul ka hooseeya kan ka sareeya.
Maaddaama ay jiraan waxoogaa jahwareer ah ereyadan, dad badan ayaa si qaldan u adeegsada fikradaha ceeryaanta, ceeryaanta, ceeryaanta ama ceeryaanta. Soo koobid, Fog waa isku-uruurinta jajabka biyaha ee sameeya daruur joog hooseysa oo aragtida ku adkaata. Dhanka kale, fikradaha intiisa kale waxaa laga soo qaatay ceeryaamo. Taasi waa, waa noocyo kala duwan oo ceeryaamo ku xiran hadba astaamaha ay leeyihiin iyo xaaladaha cimilada ee ay ku samaysan yihiin.
Dareen ahaan, daahfurnaan la'aanta waxaa sidoo kale loogu yeeri karaa xasilooni, mana ahan xaqiiqda fudud ee ay ku sheegtay ifafaalaha saadaasha hawada. Waxaa loo adeegsadaa luqadda si loo tixraaco Dhibaatada inaad awood u leedahay inaad si sax ah u sheegto ama u fikirto ama aadan arki karin shay gaar ah. Waxaad u badan tahay inaad maqashay ereyga "Waan ka bad badiyay."
Khataraha suuragalka ah ee qiiqa
Xiiqdu waa mid ka mid ah xaaladaha cimilada guud ee dalkeenna. Ma diidi karno taas, in kasta oo ay aragtida ka dhigayso mid dhib badan, waxay kaa caawin kartaa in laga qaado sawirro cajiib ah oo muuqaallo ah Meelaha buuraleyda ah, bannaanka iyo dooxooyinka qaarkood ayaa ah halka ceeryaantaasi inta badan ka dhacaan. Tani iyada oo aan la tirin, si cad, oo leh qulqulka badda. Aagga gacanka Cantabrian iyo waqooyiga daruuraha ayaa ku soo noqnoqda. Si kastaba ha noqotee, inta jeer ee joogitaanka Azores anticyclone ee xilliga jiilaalka waxay u oggolaaneysaa in ka badan 80 maalmood oo ceeryaamo ah sanadkiiba.
Tusaale ahaan, aagga buufiska Guadalquivir waxaan ka helnaa maalmo badan sanadkiiba ceeryaamo.
Khataraha suurtagalka ah ee ay leedahay cariiriga na siin kara, waxay badanaa ku dhacdaa darawallada. Haddii aad socoto oo aragtidaadu aad u adag tahay, dhib iyo khatar badan kuma haysatid. Waxyaabaha si aad ah ayey isu beddelaan markaad gaari ku dhex wado. Haddii aadan aqoon u lahayn wadista ceeryaanta way fududahay inaad shil gasho maxaa yeelay looma baran inaad ku turjunto waxyaabaha iyadoo la adeegsanayo muuqaal hoose.
Marka aad saaran tahay gaariga oo aad la kulanto ceeryaamo dhulka xeebta ah, waxaa ugu wanaagsan inaad dhigto leerarkaaga hoose si laguu arko. Uma baahnid inaad dheereysatid maxaa yeelay waxaad sameyn doonto ayaa ka sii daraysa xaaladda. Sida cad, Ku wadista xawaare ka gaabis ah waxay yareyn doontaa fursadaha isku dhaca. Haddii aad raacdo baabuurta kale xagga hore ama xagga dambe, kordhi masaafada nabadgelyada.
Si aad uga saarto qoyaanka ceeryaanta ku taal muraayadda hore, isticmaal masaxawaaraha hore. Xaqiiqdii weligaa waad maqashay oraahda ah "subaxda ciiryaamo, galabtii socod." Taas macnaheedu waa ceeryaantu waxay leedahay muuqaalkeeda ugu sarreeya aroortii iyo, iyadoo dhulku kulaalayo ficilka qorraxda, wuu iska baxayaa. Dabayshu waa cunsur kale oo kaa caawin kara saarista qulqulka.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkani kaa caawiyey inaad wax badan ka ogaatid qulqulaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Ceeryaamo
Waad ku mahadsantahay inaad nagala soo qaybgasho quraacdan badda gudaheeda ah oo aad noo cadeyso dhammaan waxyaabaha aan ka shakisanahay ee ku saabsan ceeryaanta.